पाइलट, डाक्टर र इन्जिनियर सहितको टोलि, नेपाली बिद्यार्थीको उद्दार गर्न आज चिन उड्न लाग्यो नेपाल एयरलाइन्सको विमान ! « Etajakhabar
पाइलट, डाक्टर र इन्जिनियर सहितको टोलि, नेपाली बिद्यार्थीको उद्दार गर्न आज चिन उड्न लाग्यो नेपाल एयरलाइन्सको विमान !
प्रकाशित मिति : ३ फाल्गुन २०७६, शनिबार १२:०८
काठमाडौं । सरकारले चीनको हुबेई प्रान्तमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न आज जहाज पठाउने भएको छ । कोरोना भा”इरसको त्रासले स्वदेश फर्कन चाहेका एक सय ८५ नागरिक लिन सरकारले विशेष तालिमप्राप्त टोलीलाई आज जहाजसहित चीनको हुबेई प्रान्तको वुहान सहर पठाउन लागेको हो ।
टोलीमा ३ चालक, ६ क्याबिन क्रु, २ इन्जिनियर, १–१ जना फ्लाइट डिस्प्याचर र लोडमास्टरसहित नेपाली सेनाका चारजना चिकित्सक रहने छन् । नेपाल वायुसेवा निगमको ३३०–२०० सिरिजको २७४ सिटे वाइडबडी जहाज अपराह्न ३ बजे त्रिभुवन विमानस्थलबाट उड्ने बताइएको छ ।
विमान साँझ पौने सात बजे वुहान पुग्ने र त्यसको दुई घण्टापछि नै काठमाडौं फर्किने छ । नेपाली समयअनुसार भोली बिहान २ः१५ मा नेपाल आइपुग्नेछ ।
विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि ती विद्यार्थीलाई सिधै भक्तपुरको खरीपाटी लगिनेछ । खरीपाटीस्थित विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा ती विद्यार्थीलाई १४ दिनसम्म राखिने छ ।
विद्यार्थीहरु चौबिसै घण्टा स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा हुनेछन् । सरकारले ५० जना स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष तालिम दिएर राखेको छ । खरीपाटीमा ८६ जना चिकित्सक खटाइने भएको छ ।
तीन नेपाली बालकको भारतबाट उद्धार
भारतको गोरखपुरमा दुई वर्षदेखि अलपत्र रहेका तीन नेपाली बालकको उद्धार गरिएको छ । शान्ति पुनस्र्थापन गृहले नेपाल प्रहरीको सहयोगमा उनीहरुलाई उद्धार गरेको हो । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाका १० वर्षीय रामु पुन, प्यूठान ऐरावती गाउँपालिकाका १२ वर्षीय दिलीप जिसी र १४ वर्षीय केशव जिसीलाई भारतबाट उद्धार गरिएको हो ।
दुई वर्षअघि बेपत्ता भएका बालक कृष्णनगर नाका हुँदै भारत प्रवेश गरेको सूचनाका आधारमा गोरखपुरमा फेला पारिएको थियो । दिलीप र केशव साथीहरुको लहलहैमा लागेर भारतको एक होटलमा काम गरेको अवस्थामा फेला पारिएको गृहका क्षेत्रीय संयोजक भूमिराज भट्टराईले बताउनुभयो । तिनै जनालाई कपिलवस्तुका प्रजिअ दीर्घनारायण पौडेलले परिवारको जिम्मा लगाउनुभएको छ । संस्थाले एक वर्षको अवधिमा १३ बालबालिकालाई भारतबाट उद्धार गरी परिवारको जिम्मा लगाएको संस्थाका जिल्ला संयोजक निशा पन्थीले बताउनुभएको छ ।